Ny fisakaizana (Mpitt. 4:9-12)
Inona no hevitra fototra resahin'ny Mpitt. 4:9-12? Inona no fitsipi-piainana manan-danja ampianarin'ireo andininy ireo antsika?
Vitsy amintsika no mitoetra irery eo amin'ny fiainana. Ary na dia tia mitokantokana sy mijanona ho irery aza isika dia misy ny fotoana izay tsy hoe anirinantsika hanana namana fotsiny ihany fa tena ilantsika izany, indrindra amin'ny fotoana maha-sahirana. Eny tokoa, natao ho an'ny fiarahamonina sy ny fisakaizana isika. Tokony ho velom-pankasitrahana ireo izay manana ankohonana akaiky azy, dia ireo izay manohana sy mitia azy amin'ny fotoana ilany izany indrindra. Tsy ny olon-drehetra no manana ankohonana na mahatsiaro ho akaiky ireo ankohonany.
Mampalahelo fa misy olona ao amin'ny fiangonantsika, any amin'ny toeram-piasantsika sy ny fiarahamonina misy antsika izay tsy manana na iza na iza hitodihana, tsy amin'ny fotoana ilany fanampiana ihany fa na dia amin'ny resadresaka fanao amin'ny fiafaran'ny tontolo andro aza. Amin'ny fotoana rehetra no mety hahatsapana ho irery. Nilaza ny lehilahy tsy manam-bady iray fa mahatsiaro ho irery kokoa izy rehefa Alahady, noho ny amin'ny andro hafa. Mandritra ny herinandro mantsy dia misy olona hatrany manodidina azy any am-piasana, mahita olona any am-piangonana izy rehefa Sabata. "Mahatsiaro ho irery anefa aho rehefa Alahady", hoy izy.
Inona no fitsipika manan-danja azontsika ianarana avy amin'ny Jao. 16:32,33 sy ny Fil. 4:11-13? Ahoana no hanampian'izany fitsipika izany antsika amin'ny fotoana hahatsiarovantsika ho tena irery?
Fantatsika amin'ny maha-Kristianina antsika fa misy tokoa Andriamanitra, ary azontsika atao ny misakaiza Aminy. Afaka mifaly isika, araka izany, satria tiany ny hanakaiky antsika. Misy zavatra tokony hotadidintsika anefa; nifanakaiky tamin'Andriamanitra tokoa i Adama tao Edena saingy tsy nahasakana an'Andriamanitra tsy hanamboatra vady ho azy izany. Hoy Andriamanitra: "Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy." - Gen. 2:18. Fantatr'Andriarnanitra fa na dia nanana fifandraisana taminy tao anatin'ny tontolo tsy simban'ny fahotana aza i Adama dia nilainy ny hanana namana olombelona. Mitombina ho antsika amin'izao fotoana izao koa izany, mihoatra noho izany aza noho isika monina eto amin'ny tany efa simban'ny fahotana.
Ilaintsika anefa ny mitandrina amin'ny fiheverana fa rehefa misy olona marobe manodidina ny olona iray dia tsy hahatsiaro ho irery izany olona izany. Monina any amin'ny tanan-dehibe izay ifaneraserana amin'olona maro ny sasany amin'ireo olona mahatsiaro tena ho irery indrindra. Ny fisian'ny olona marobe manodidina azy dia tsy midika fa tsy hahatsiaro ho irery sy voailika ary mila namana ny olona iray.
Tsy mora mandrakariva ny mamantatra ny olona mahatsiaro ho irery sy voailika na izay mila fatratra olona azony iresahana. Inona no azonao atao mba hahatonga anao ho naman'ireo olona mahatsiaro ho irery izay manodidina anao?